Raiisul wasaaraha Hindiya oo booqday Falastiin – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Raiisul wasaaraha Hindiya oo booqday Falastiin
STN News February 10, 2018 Leave a comment
Raiisul wasaaraha dalka Hindiya, Narendra Modi ayaa booqday magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka Falastiin, halkaa oo uu wadahadal kula yeelan doono madaxweynaha Falastiniyiinta Maxamuud Cabaas.
Booqashada raiisul wasaaraha Hindiya ayaa imaneysa xili uu sii xoogeysananyo xiriirka u dhaxeeyo Israiil iyo Hindiya. Dadka qaar ayaa booqashada raiisul wasaare Modi u arka inay tahay mid dowladda Hindiya ay isu dheelitireyso xiriirka kala dhaxeeya Falastiin iyo Israiil oo ay xurguf u dhaxeyso.
Raiisul wasaare Modi ayaa maanta ka ambabaxay dalka Urdun, taasi oo qeyb ka ah safaro uu ku marayo dalalka Cumaan, Imaraatka iyo dhulka Falastiin.
Sidookale raiisul wasaaraha Israiil ayaa dhawaan booqday dalka Hindiya, halkaas oo si heersare ah loogu soo dhaweeyay.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa dhawaan magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israiil, waxaana tallaabadaasi ay dhalisay caro ka dhan ah Mareykanka iyo in wadamada ugu quuwadda weyn caalamka ay ku kala qeybsamaan go’aanka maadxweynaha Mareykanka.
Ilaa iyo hadda ma cadda waxa ay ka wada hadli doonaan iyo waxa kasoo bixi kara wadahadalka raiisul wasaaraha Hindiya iyo hogaamiyaha Falastiin.
← Kim Jong-un oo shir ku casuumay madaxweynaha Kuuriyada koonfureed.
Qaramada Midoobay oo ka walaacsan sida uu u socdo gargaarka Suuriya →